फेसबुक लाइभमा रूदै आएर आत्मह’त्या गर्न तम्सिएकि १७ बर्षिया युवतीलाई सहयोग गर्न पुगे शिशिर (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > फेसबुक लाइभमा रूदै आएर आत्मह’त्या गर्न तम्सिएकि १७ बर्षिया युवतीलाई सहयोग गर्न पुगे शिशिर (भिडियो हेर्नुस्)
फेसबुक लाइभमा रूदै आएर आत्मह’त्या गर्न तम्सिएकि १७ बर्षिया युवतीलाई सहयोग गर्न पुगे शिशिर (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 6, 2020 भिडियो, समाज	0
शिशिर भण्डारी- बिहानै नेपाल क्या न्स र हस्पिटल पुग्दा बहिनी बिष्णुमायाले रुदै भन्नुभयो दाई, “म त आत्मह’त्या गर्नेसम्मको सोचमा पुगिसकेको थिएँ । तर मै मरे भने मेरो आमा बाबालाई कस्ले हेर्छ भनेर रोकिए” । १७ बर्षकै उमेरमा यति जिम्मेवार बहिनीको कुराले मन निकै रोयो । आफ्नो क्या न्सर लागेको आमा बुवालाई बचाउन पैसाको अभाव भएपछि हिजो बिष्णुमाया लो बहिनीले “यो भिडियो शिशिर भण्डारीसम्म् पुर्याइदिनुहाेस ।
भाग्य न्यौपाने दाईसम्म पुराईदिनुस” भनेर रुदै फेसबुक लाईभ गर्नु भएछ । मलाई उक्त भिडियो धेरैले पठाउनुभयो र आज बिहानै हस्पिटल पुगे । बिगत १ बर्षदेखि आमा बुवा दुवैलाई हस्पिटलमा राखेर क्या न्स रको उपचार गराईरहेकी यो छोरीको दुख र मर्मलाई बुझेर देश तथा बिदेशबाट सबैले सहयोग गर्नुहोला । मैले सक्ने सहयोग रु ५ हजार नानीलाई बुझाए र भिडियो बनाएर सहयोग अपिल पनि गरेको छु । अब तपाईको पालो । सबैले शेयर गरिदिनुस है ।
सहयोगका लागि-शिशिर भण्डारी – ९८११००६९२९, पीडित बिष्णुमाया लो ९८४०८८५०९४
चीनबाट यी नेपाली चेलीले लेखिन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो मार्मिक पत्र, पत्र पढेपछि कस्काे मन नरूनेहोला? (पत्र सहित)
अष्ट्रलिया काण्ड : भिडियो इडिट गरिएको भन्ने वास्तविकता यस्तो! (भिडियो हेर्नुस्)